Kismaayo News » Shir looga hadlayo degmooyinka Matabaan, Maxaas, Baydhabo, Cadaado iyo Baladweyne oo Jabuuti ka furmey
Shir looga hadlayo degmooyinka Matabaan, Maxaas, Baydhabo, Cadaado iyo Baladweyne oo Jabuuti ka furmey
Kn: Waxaa maanta magaalada Djibouti, Hotelka Kempinsk ka furmay kulanka Qorsheynta Xasilinta Soomaaliya oohalkaas ka socon doono muddo 4-cisho ah. Kulankan waxaa soo qabanqaabisay Dowladda Federaalka Soomaaliya gaar ahaana Guddiga u qaabilsan Xasilinta iyo dib u heshiisiinta (National Steering Comittee). Barnaamijka ayaa waxaa fududeeyey Hay’adda mucaawinadda Mareykanka ee USAID.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa mudnaan gaar ah siiyey sidii gobolada laga xorreeyo Al-Shabaab loogu heli lahaa dhammaan adeegyada bulshada si deegaanadaas ay u arkaan faa’iidada nabadda, isla markaana loo fulin lahaa qorshaha dowladda ee ah in deegaanada cusub la gaarsiiyo adeegyada bulshada, isla markaana beelaha deegaanka la dhexdhigo dib-u-heshiisiin waarta oo keeni karta in dadka deegaanka ay doortaan maamulkooda oo shacabka deegaanka siin kara kalsooni. Ra’iisul Wasaaraha ayaa magaacabay guddi heer wasiir ah oo arrimahan in muddo ah ka soo shaqeynayey. KismaayoNews.com KismaayoNews.com